I-MacBook yeshishini, i-Apple core kwi-3D kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ingcono ndisuka eMac | Ndisuka kuMac
Le veki iqale ngeendaba ezininzi ezibalulekileyo kwihlabathi iApple kunye kwa Ndisuka Mac sifuna ukwabelana nawe ezinye kakhulu ezibalaseleyo. Siphakathi kwenyanga kaNovemba kwaye kubonakala ngathi iiholide zeKrisimesi azisekho i-brake, ukufika kokuthengwa kwe-11-11 okanye i-Black Friday ivula ixesha lomthendeleko kwaye libonisa emoyeni. Njengoko oku kuhamba usuku nosuku siza kuqhubeka neembalasane zethu zeveki.
Yiyo loo nto sifuna ukuqala ngeendaba ezibalulekileyo ze-Apple kwaye imalunga ne ukuphunyezwa kweMacBook eneprosesa yeM1 kwiinkampani. Kubonakala ngathi ulwamkelo lwala maqela luhle kakhulu njengoko ezinye iinkampani zine ukufika kwezi zixhobo kubasebenzi bakho.
Enye yeendaba ekufuneka sibe nazo kolu luhlu luncinci lwezona ndaba zibalaseleyo yile ibhekisa kuyo ukukhula kwesabelo semarike yeApple TV +. Kule meko ayikho kakhulu kodwa kunjalo inyathelo elibalulekileyo le-Apple kunye neenkonzo zayo.
Siqhubeleka neendaba ezibalaseleyo zale veki nenye kwezo zibalulekileyo. NgoLwesithathu odlulileyo uphawulwe unyaka ukususela ekufikeni kweeMacs zokuqala ezine-M1 processors. Ewe, kule veki iprosesa yeApple Silicon yayinonyaka ubudala kwaye kubonakala ngathi bebekunye nathi ubomi babo bonke ngenxa yeempawu ezilungileyo ezinikezela kwi-Apple Macs.
Ukugqiba sifuna ukwabelana nge Imodeli ye-3D abayipapashayo ye-Apple Car, Imoto ye-Apple ehlakaniphile kunye nombane. Eli lihemuhemu ebesilibona iminyaka kwaye ngokusengqiqweni uyilo yale mifuziselo isekelwe kumalungelo awodwa abenzi kunye namarhe apapashwe kutshanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-MacBook yeshishini, i-Apple core kwi-3D kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ndisuka eMac
UJennifer Garner ungene endaweni kaJulia Roberts kwinto yokugqibela awandixelela yona